Ifektri ye-yoga block mveliso kunye nabathengisi
Isithintelo seYork Yoga
Inkcazo: Iibhloko zeyoga zizinto ezithandwayo zeyogis kuwo onke amanqanaba, zibonelela ngenkxaso enkulu kunye nozinzo kwimingeni enzima, kunye nokubonelela ngoncedo olunobunkunkqele noluncedo ekubuyiseleni imeko, ukucamngca kunye nokunye. Umgangatho weprimiyamu, i-100% ye-Cork yendalo ngokukhawuleza iya kuba yintandokazi entsha. Ilula kakhulu kodwa yomelele ngokulinganayo kwaye yomelele. Yandisa ukolula kwakho kwaye ulungelelanise ukuma kwakho kungabikho mgudu ungako kwaye akukho kuxinana.
Cork enobubele: Ibhloko yethu yenziwe nge-100% yemithi yekhokho yendalo, izinto ezinokulondolozwa kokutya okuziinkozo; ke ngoko inomgangatho oqinileyo olula wokubamba. It is a non-ityhefu, yomelele, non-ukutyibilika, ivumba-enganyangekiyo kunye ukufuma-ubungqina block.
Umgangatho onokuhlala ixesha elide: Zenziwe nge-Eco-friendly cork, ezi bhloko zeyoga zikunika ukubamba okuthambileyo okumangalisayo! Kananjalo zihlala zomelele ngokungakholelekiyo kwaye ziyanyibilika, ziyilelwe kakuhle ukukunceda kuqeqesho lwakho lweyoga kwiminyaka ezayo.
Imiphetho yokuthuthuzela: Imiphetho ebunjiweyo yale bhloko ibonelela ngokuthamba, okukhuselekileyo kunye nokuqina okuthe tye.
Ikhuselekile kwaye iyasebenza: Ukuphucula ukuziqhelanisa kwakho usebenzisa iibhloko ukomeleza ukuziqhelanisa kwakho, ugcine ulungelelwaniso olufanelekileyo, kwaye uncede uhlale ukhuselekile ngokunciphisa ukulimala kunye nobunzima bemisipha- le bhloko inokukunceda wenze konke.
Ubungakanani obukhoyoIi-sizs zethu eziqhelekileyo zi-7.6 * 15.2 * 22.9cm kunye ne-10.2 * 15.2 * 22.9cm Ukongeza, unokwenza ubungakanani kunye nobunzima obufunayo.